musha » Blog » The Basics of Bodybuilding
Kuvaka muviri kunomutambo wekuvaka musuru. Mukuru uye akasimba ndiro zita remutambo. Chimwe chezvinhu zvikuru pamusoro pekuvaka muviri ndeyekuti unogona kuwana zviitiko zvikuru nemichina chete yezvigadzirwa uye maawa mashomanana ekudzidzira katatu kana mana pavhiki.
Chinokosha pakuvaka mishonga yakakura uye yakasimba ndeyekuenderera mberi zvishoma nezvishoma kuwedzera uye kuwedzera kuwedzera kwemazuva. Kuvaka miviri yakakura ndeyekudzidzira nguva dzose, kudzika zvakanaka, kuwana zororo rakawanda, uye zvizhinji zvekuresa pazvinyorwa zvishoma.
Sezvatangotanga chirongwa chipi zvacho chekuita muviri, zvinokosha kukosha kokutanga nachiremba wako usati watanga chirongwa chekuvaka muviri. Nguva uye nguva zvakare vadzidzisi vezvemiti vati mhando ndeimwe yezvinhu zvinokosha zvakanyanya zvekuita basa rakanaka.
Izvo chete kana musuru hugadzirisa pachavo kuti huri kukura uye hune simba. Nokuda kwechikonzero ichi zvakakosha kuti boka rimwe nerimwe remasumbu rinopiwa kuzorora kwakapfurikidza mushure mekuita basa rimwe nerimwe. Vakawanda vanobudirira muviri vanokurudzira kuti usashanda rimwe boka remasumbu kanopfuura kaviri pavhiki.
Mubvunzo unogona kuuya kana kuti zvakanakisisa kushandiswa kwemashini ekurema kana zviremba zvisina kuiswa. Iko maonero ose ndeokuti mahwindo asingasununguswi ndiyo nzira yako yakanakisisa yekuwedzera musimba mashoma. Machini anowanzoshandiswa kuisa zvimedu mumasumbu uye ichi ndicho chinhu chine vadzidzisi vemuviri chete vanofanira kuita vasati vadzikwi.
Izvi zvinotevera zviito zvakakosha zvemashoko makuru emasumbu.
3. Ita kuti Bench Press
1. Tora ups
2. Rambai makorom
1. Kureva Kunotora Zvokuwedzerwa
Yeuka kuwedzera ukuru hwemasumbu iwe uchada kuwedzera zvishoma nezvishoma kuwedzera. Kunyanya kushanda mumasumbu ako kunogona kuva nemigumisiro yakaipa. Kana iwe uchiramba uchigara uchiita basa rekushanda pamwe nekudya kwakakodzera uye zororo iwe uchatanga kuona zvigumisiro pasina nguva. Kana uri kutsvaga rumwe ruzivo, pane zvakasiyana mabhuku ekudzidzisa kuti iwe unogona kutenga nezvekuvaka muviri.
Sanganisa & Mechi A 3-Piece Yoga & Fitness Set Uye Chengetedza 15% PaGaiam Yakakodzera kusvika 3/31/15